‘शिर्जनशील विद्यालय’: शिक्षकका लागि सहयोगी पुस्तक | Educationpati.com
२०७३ पुस १९ गते ०३:०३मा प्रकाशित
सामुदायिक विद्यालयको खस्कँदो शैक्षिकस्तरप्रति सबैतिर चासो र चिन्ता बढिरहेको बेला गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सहयोगी पुस्तक बजारमा आएको छ ।
‘शिक्षकले चाहेमा गर्न सक्छन्’ अभियानले प्रकाशनमा ल्याएको ‘शिर्जनशील विद्यालय’ नामक पुस्तक शिक्षकहरुका लागि निकै नै सहयोगी हुनेछ । विद्यालय सुधारमा ‘केही गरौँ’ भन्ने शिक्षकहरुका लागि उपयोगी यस पुस्तकमा विद्यालय सुधारका ७ (सात) पक्ष समाविष्ट छन् ।
विद्यालय वातावरण, बालमैत्री विद्यालय, शैक्षिक सामग्री निर्माण तथा प्रयोग, शिक्षण कला, भौतिक पूर्वाधार/स्रोत व्यवस्थापन, स्वमूल्याङ्कन र अन्त्यमा ‘मनन गरौं’ सहित ७ (सात) अध्यायमा विभक्त पुस्तक सटिक र बँुदागत रुपमा तयार गरिएको छ । प्रत्येक अध्याय र विषयवस्तुमा देशका विभिन्न जिल्लामा भए गरेका राम्रा अभ्यासलाई उदाहरणका रुपमा पेश गर्दै धेरै विद्यालयहरुले सहजै गर्न सकिने पक्षहरु सुझाएको छ ।
सरकारी विद्यालयको विकल्प निजी हैन । हुन पनि सक्दैन । हुनु हुदैन पनि । यहि विश्वासले सरकारी विद्यालय सुधार्ने क्रममा यो पुस्तकको जन्म भयो । परिणामतः यो पुस्तकले सरकारी विद्यालयका राम्रा पक्षहरु प्रस्तुत गरेको छ । कसरी ती विद्यालयहरु राम्रा भए भनी आधारहरु दिएको छ । पुस्तकमा केही व्यवहारिक सोच दिएको छ । सैद्धान्तिक दृष्टिकोणहरु राखिएको छ । लेखककै अनुभवहरु समावेश गरिएको छ । यसरी हेर्दा प्रस्तुत पुस्तकले सरकारी विद्यालय सुधार्न चाहनेहरुलाई बाटो देखाएको छ । विद्यार्थी र अभिभावकको चासो पूरा गर्ने उपाय सिकाएको छ । सरकारी विद्यालय सुधार्न चाहनेहरुलाई थप उर्जा दिएको छ । त्यसैले पुस्तक संग्रहनीय छ– संग्रहकर्तालाई । पठनीय छ– पढन चाहनेहरुलाई । सहयोगी छ– सरकारी विद्यालय सुधार्न चाहनेहरुलाई । – प्रा. डा. विद्यानाथ कोइराला
यस पुस्तकले ‘केही गरौँ’ /‘अब केही गर्नुपर्छ’ भन्ने शिक्षकलाई सहयोग पु¥याउनेमात्र नभई राम्रा अभ्यास गरिरहेका शिक्षकहरुलाई समेत थप सहयोग गर्नेछ ।
पुस्तक पत्रकार एवम् शिक्षाकर्मी अर्जुन श्रेष्ठले लेख्नुभएको हो भने यसको सम्पादन प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले गर्नुभएको छ । पुस्तकको मूल्य ३००/– (तीन सय रुपैयाँ) रहेको छ ।